Izindawo ezingama-8 zemilingo eSpain (I) | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Izindlela zokuphunyuka, España, Impelasonto
Uma uthandile amakhona omlingo eGalicia, singaya phambili kancane bese sesha izindawo zemilingo eSpain. Amasayithi akhethekile anokuthile okuwenza abe yimfihlakalo futhi ahluke. Ziyizindawo ezithakazelisa kakhulu okufanele wonke umuntu azivakashele okungenani kanye, futhi zonke ziyizikhala zemvelo, ngoba yimvelo egcwele umlingo kakhulu.
Uma uyayithanda yenza izinkambo ezikhethekile futhi ujabulele uhlu olunezindawo ezithokozisayo nezindawo ongazithola, lezi zikhala zemilingo eziyisishiyagalombili zizoba yinto edingekayo kulabo abathola ngempelasonto. Ezinye ziyaziwa, ezinye azaziwa kangako, kepha zonke zinomlingo nobuhle obuningi bokuqinisekisa izihambi.
1 Umgede Wemifino eLanzarote
2 Ihlathi le-Irati eNavarra
3 ISierra de Cazorla Natural Park
4 IBardenas Reales eNavarra
Umgede Wemifino eLanzarote
Uma uluthandile 'Uhambo lukaJules Verne oluya esikhungweni soMhlaba', ungahle uthande ulwazi lweCueva de los Verdes eLanzarote, ishubhu elijula ​​emathunjini omhlaba enyakatho yesiqhingi saseLanzarote. Le grotto emangalisayo yakhiwa ekuqhumeni kwe- Intaba-mlilo iLa Corona, eminyakeni engaphezu kwezinkulungwane ezinhlanu edlule. Umhubhe unobude obukhulu, futhi usuka entabamlilo uye olwandle, ungena kuwo emhubheni ongaphansi kwamanzi owaziwa ngokuthi Umhubhe wase-Atlantis, kusukela ngaphambi kokuba ulwandle lube ngaphansi. Lona ngumhubhe wentaba-mlilo omude kunayo yonke emhlabeni, onamakhilomitha angaba yisikhombisa. Endaweni eseduze kakhulu nogu kulapho ungathola khona iJameos del Agua, ukuvuleka okuvumela ukungena emigedeni. Bakhanyiselwe ukuvakashelwa, futhi kukhona ngisho nehholo ngaphakathi kubo, okwenza kube isipiliyoni esikhethekile ngempela nesingamasiko.
Ihlathi le-Irati eNavarra
Izikhala zemvelo zihlala zinokuthile ngomlingo ngazo, ngakho-ke ihlathi lesibili ngobukhulu le-beech ne-fir evela kulo lonke elaseYurophu, ngemuva kweHlathi eliMnyama elihehayo laseJalimane, bekungeke kube ngaphansi. ILa Selva de Irati yindawo ekhetheke kakhulu, ephelele ukuvakasha nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, njengoba iveza isithombe esihlukile njalo. Itholakala empumalanga yePyrenees, futhi kungenzeka ukuyifaka kusuka e-Orbaizeta noma e-Ochagavía, eminye imizana emihle enentelezi eningi.
Kuleli hlathi kungenzeka kwenziwe imisebenzi eminingi ethokozisayo yomndeni wonke. Isibonelo, kukhona Imizila emakiwe eyi-16 ngokuhamba ngezinyawo emazingeni ehlukene, ngaphansi kwamakhilomitha ayishumi, okwenza kube yindawo efanelekile yabathandi balo mdlalo, abafuna ukuthola ikona lehlathi ehlathini. Ungenza futhi imizila yamabhayisikili asezintabeni noma ama-ascents aye ezintabeni ezahlukahlukene zehlathi.
ISierra de Cazorla Natural Park
Leli paki liyingxenye ye- ISierras de Cazorla, iSegura neLas Villas Natural Park, isikhala semvelo esiseJaén. Umenyezelwe njenge-Biosphere Reserve yi-UNESCO kanye neNdawo Yokuvikela Ekhethekile Yezinyoni. Kepha ngaphezu kwenani layo eliphakeme lemvelo, kunamakhona amaningi enza ukuthi kukufanele ukuvakashelwa ngokuthula kwengqondo. Kule paki yemvelo kunemizila engenakubalwa yokulandela imizila ethakazelisa kakhulu, enezimpophoma, iziqongo, amathrekhi obunzima obuhlukahlukene ngisho nezinqaba, njengeCastle of Segura de la Sierra, etholakala phezulu egqumeni ukuphatha yonke indawo . Kukhona nemizila ekhethekile ngebhayisikili, noma ungahamba ngemoto ngezindlela ezithile, futhi ungafinyelela eminye imizana esezintabeni, lapho impilo ibonakala iqhutshwa ngendlela enokuthula nokuzola okukhulu.
IBardenas Reales eNavarra
Kukhona labo abathola ikhubalo elikhethekile ku- izindawo ezingenabantu, ngalolo hlobo buthule ngokuphelele, ukuthula nokuthi sincane kangakanani lapho siqhathaniswa nezindawo ezinkulu ezingenazo izimila namathafa angapheli. IBardenas Reales etholakala eNavarra, eduze kwaseTudela, iyindawo enogwadule ongathola kuyo lokhu kuzola nobukhulu bezingwadule. Izindawo ezibukeka kahle ezibonakala zithathwe e-Arizona noma eWild West, kodwa hhayi eSpain. Lezi zindawo ziyipaki yemvelo evikelekile, ngakho-ke ukuvakasha kwethu kuzovinjelwa kakhulu kuneminyaka edlule, ukuvikela izindawo zemvelo ekuxhashazweni kwezokuvakasha uqobo.
Ama-bardenas angavakashelwa kusukela ngehora lesishiyagalombili ekuseni kuze kube yihora ngaphambi kokushona kwelanga. Kunesikhungo sezivakashi lapho singakwazi ukuqoqa lonke ulwazi noma siqashe imihlahlandlela ukuthola imizila ethakazelisa kakhulu, ngoba ingenziwa ngisho nge-segway, indlela yokuqala yokuhamba. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela le mizila ngemoto, ongakwazi ukuhamba kuyo, kungaba ngezinyawo noma ngebhayisikili. Enye yezindlela zokwakheka kwamatshe ezinganekwane kakhulu yi Inhloko yeCastildetierra, ecishe imele isithombe seBardenas Reales. Ngaphandle kokungabaza kuyindawo yemilingo futhi ekhetheke ngempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Izindawo ezingama-8 zemilingo eSpain (I)
Ama-bardenas asebukhosini ase-Arguedana Navarra. Indawo enhle emhlabeni
Ukuvakashela ugu olusempumalanga ye-United States neCanada, ingxenye yokuqala